နည်းပညာအခက်အခဲ အချို့ကြောင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအစီအစဉ်အား Live ထုတ်လွှင့်ရန် အဆ… – PVTV Myanmar
· 8 months ago ·41 Comments
နည်းပညာအခက်အခဲ အချို့ကြောင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအစီအစဉ်အား Live ထုတ်လွှင့်ရန် အဆင်မပြေဖြစ်သွားပါသဖြင့် Delay ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းပေးလိုပါသည်။
Myanmar Now Media ၏ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကို ကြည်ရှုနိုင်ရန် ထပ်ဆင့်မျှဝေလိုက်ပါသည်။
Like – 17K Share – 4087
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ ဝင်ငွေဒေါက်တိုင်တွေကို သပိတ်မှောက်ဖို့ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအင်အားစု(WTRF) က တိုက်တွန်းနှိုးဆော်
2021-06-04 at 5:23 PM
Mobile internet မရတော့ပါ ပိတ်ချလိုက်ပြီထင်တယ်
Wathann Min Aung says:
Mizzimaကလွှင့်ပါတယ် Facebook မှာရော youtueမှာရော ကြည့်လို့ရပါတယ်
Paing Zin Min Kyi says:
Myanmar Now live ကနေကြည့်နေပါတယ်
Hana Zawa says:
ခုမှ mobile dataပြန်ပွင့်တယ်၊wifiလိုင်းတွေမပွင့်သေးပါ။
Khaingsu Zin says:
နင်တို့ပြောတော့ လေလှိုင်း အစိုးရ ဆို မိအောင်လိုင် ရယ် ကြောက်လှချည်လား
ခုမှ wifi ပြန်ရတယ်…ယုတ်မာတယ်​နော်🤮🤮
Amelia Lilian Han says:
2021-06-04 at 6:04 PM
ခေါင်းမရှိတော့ ဖိလေ ကြွလေဆိုတဲ့ သဘောကို နားမလည်ရှာဘူး
ကမကလ ခသတစ မအလ
ဘီး က်ဲ says:
N U G ထောက်ခံပါတယ်
Media interview by NUG Ministers is important. Due to MHA Junta cutting of internet connection/and disturbances many people will have difficulty to listen direct transmission. Please record and transmit the interview all the time. And also type and posted on facebook, twitters etc.
Thein Tan says:
2021-06-04 at 6:09 PM
2021-06-04 at 6:10 PM
Loretta Htun Aye says:
2021-06-04 at 6:11 PM
မအလတို့ ယုတ်မာလေ ပြည်သူက nug ကိုပို အားကိုး ပိုထောက်ခံ ပိုယုံကြည်လေဘဲ
U Mg Mg Aye says:
Mika Zuki Augustz says:
2021-06-04 at 6:12 PM
နည်းပညာ အခက်အခဲ မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ်မေကို double triple လိုး တဲ့ သောင်းလှိုင် သား မအေလိုး ခွေးလိုးမသား လီးကောင်(လီးနဲ့ နှိုင်းရင် လီးသန တယ်) အဲ့ကောင် လုပ်တာ ပါ
အင္တာနက္ ေတြ အကုန္ျဖတ္
မအလ ေတြ အဲ့သလိုလုပ္ေလ မင္းတို႔ ေစာက္က်င့္ယုတ္တာ ျပည္သူေတြသိေလ ပိုၿပီးေတာ္လွန္ၾကေလဟ 😎😎
Htaw Htaw May May says:
We support and stand with NUG ❤️
2021-06-04 at 6:16 PM
သူတို့ အင်တာနက်တောင် ပိတ်ရတယ် အင်ယူဂျီ ကို အဲလို ကြောက်တာ
Kyi Nwe says:
သူတို့ ပြောတော့ လေ လှိုင်း အစိုးရပြောလို့ပြော နာမ်ဘဲရှိ ရုပ် မရှိပြောလို့ပြောနဲ့ ကြောက်ချီးတွေ ပန်းတာမှ ကူးစက်ဆေးရုံတောင် မမှီဘူး
Maung Myo says:
Hsuhnin Wai says:
Su Hlaing Moe says:
တောင်းပန်စရာမလိုပါဘူး ပြည်သူက ခွင့်လွှတ်ပါ တယ်.. သတစ အမျိုးယုတ် သောင်းလှိုင်သားက အောက်တန်းစားဆန်ဆန်ပြုမှူတာ.. စောက်ကြောက်
2021-06-04 at 6:22 PM
မအေလိုး မင်းအောင်လှိုင် 5နာရီထိုးတော့ ​ကြည့်မရလို့ ပြာနေတာ ငါတစ်ယောင်တည်းထင်နေတာ ခုတော့ ခွေးကျင့် ခွေးကြံကိုး
2021-06-04 at 6:25 PM
Very pleassed to have suchalook.
Khin San Wai says:
2021-06-04 at 6:28 PM
2021-06-04 at 6:31 PM
မဟုတ်တာ လုပ်တဲ့ လူက အရာရာကို ကြောက်နေတာ သဘာဝပါ
NUGအစိုးရကို ​ပြော​တော့ ​လေထဲကအစိုးရတဲ့..​ကြောက်လိုက်တာက ကမ်းကုန်တယ်..😏
NUGက ည​နေ 5နာရီမှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်မယ်ဆိုတာနဲ့
5နာရီကစပြီး အင်တာနက်လိုင်း​ရော၊ဝိုင်ဖိုင်​ရော ပိတ်ပလိုက်တယ်…ဟ ဟ ရယ်ရတယ်..😅
ပြောတော့သာ လေထဲ က အစိုးရတဲ့ ကြောက်ချီးပန်းချက် က လိုင်းကို ကွက်တိ ဖြတ် တယ် ခွေးဟောင်လို့ လမင်းအသာမပျက် ဘူး မအလရေ သိဖို့
Yee Yee Kyaw says:
2021-06-04 at 6:54 PM
Aung Khaa says:
မအလ ယုတ်မာမယ်ဆိုတာ ပြည်သူက ကြိုတွက်ပီးသားမို့ တစ်နိုင်ငံလုံး နားလည်ပါတယ်ဗျ ဒါ့ကြောင် မြန်မာပြည်ကြီး ကျန်းမာ ချမ်းသာဖို့ ဆက်လုပ်ပါ NUG & PDF ဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် ပြည်သူအားလုံး မားမားမတ်မတ် ပူးပေါင်းပါဝင်တည်ရှိနေပါတယ်
Aungkyaw Sinnt says:
2021-06-04 at 7:15 PM
စကစတွေ ယုတ်မာမှုတွေ ပြည်သူတွေ ပိုသိရပါပြီ။
May Moe Swe says:
2021-06-04 at 7:16 PM
We support NUG ✊✊✊
Thi Thi San Oo says:
2021-06-04 at 7:21 PM
May Myat Pwint Han says:
2021-06-04 at 7:22 PM
အခက်အခဲတွေကြားက ကြိုးစားပေးနေတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အောင်မြင်ပါစေရှင်
Live ထုတ်လွှင့်ပေးသော Myanmar Now အား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။
Wai Wai Aung says:
2021-06-04 at 7:31 PM
We Support NUG & PDF
No problem…ဟို မအလတွေ ဘယ်လိုပဲ ယုတ်မာယုတ်မာ NUG ကို အမြဲယုံကြည်တယ် ♥️♥️♥️အရေးတော်ပုံ အောင်ခါနီးလေ မအလတို့ သွေးပျက်လေပဲ
Mei Hway says:
2021-06-04 at 8:40 PM
သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲကို ေႏွာင့္ယွက္တာ နည္းနည္း. ျပည္တြင္းမွာ ဘယ္ဝန္ႀကီးေတြ ႐ွိေနတယ္ဆိုတာကို Confirm လုပ္တာပါ..ျပည္တြင္းမွာ ႐ွိေနေသးတဲ့ NUG ဝန္ႀကီးေတြ လက္ရွိတည္ေနရာကို တခ်က္ သတိထားၿပီး လုပ္ေဆာင္သင့္တာ ျမန္ျမန္လုပ္ေဆာင္ေရြ႔ေျပာင္းတာမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္.. ကိုယ္ေတြထက္ ေတြးတတ္မွာလို႔သိေပမဲ့ သတိဆိုတာ ပိုတယ္မ႐ွိပါဘူး.. ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးႏိုင္တဲ့ပုဂိၢဳလ္ေတြၾကားထဲမွာ႐ွိေနတဲ့သူမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ ထူးၿပီးစိတ္ပူစရာမလိုပါဘူး. ဂ႐ုစိုက္ၾကပါ.
2021-06-04 at 9:14 PM
Kanzen Na Ame says:
2021-06-05 at 3:40 AM
မအလ ကျရှုံးပါစေ အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။